अपेक्षाकृत छैन लुट-२: नाक खुम्चाउन बाध्य अधिकांश दर्शक - Purbeli News
अपेक्षाकृत छैन लुट-२: नाक खुम्चाउन बाध्य अधिकांश दर्शक
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण १३, २०७३ समय: १७:२६:२०
लुट–२ ब्यग्र प्रतिक्षा पछि हेर्ने अबसर मिल्यो । शुरुको शो मा कुनै टिकट नमिलेपछि डिलक्सको २ वटा टिकट लिएर हलभित्र प्रबेश गर्यौ । इटहरीको आई सिनेमाको हल १ र हल २ मा दर्शकहरु खचाखच नै देखिन्थे । केही क्षणपछि सबैको पखाईको घडी सकियो । फिल्म शुरु भयो ।
केही अश्लिल शब्दहरु तथा भद्दा लाग्ने दृष्यहरू सँगै अब केही कथा शुरु होला भन्दा भन्दै हाफ टाईम भएको सुचना देखियो । हाफ टाईम पछिको समयमा केही कथा होला भन्ने हामीजस्ता थुप्रै दर्शकहरु त्यतिखेर चित खाए जतिबेला बिना कथा नै फिल्म सकियो ।
फिल्मको ट्रेलर र ठमेल बजार गित सार्बजनिक भएपछि दर्शकहरुमा जुन फिल्म प्रतिको तिब्र मोह त्यतिखेर बेकार लाग्छ जतिबेला बिना कथा नै फिल्म सकिन्छ । लुट–१ म जुन कथा थियो लुट–२ को कथा पनि लगभग त्यही छ । नयाँ लोकेसन र नयाँ संवाद कुनै पनि चलचित्र अबधिभर खासै पाईँदैन । चलचित्रमा पुरानै कलाकार, पुरानै कथा, पुरानै लोकेशनका कारण सिंगो चलचित्र खल्लो महशुस हुन्छ । जसरी यसअघि बहुप्रतिक्षित भनिएका पुरानो डुंगा लगायतका चलचित्र हेरेपछि दर्शक नेपाली फिल्म प्रति नाक खुम्चाउन बाध्य भएका थिए । यो फिल्मले पनि त्यही क्रमलाई निरनतरता दिएको छ ।
अघिल्लो बर्ष नेपालमा गएको बिनाशकारी भुकम्प र त्यही भुकम्पले जेलमा क्षति पुर्याउदा भागेका लुट–१ कैदीहरु पुरानै कथामा फर्कन्छन । उनीहरुको खोजी हाकु काले (सौगात मल्ल) को खोजीमा कथाको अघिल्लो भाग टुगिंएको छ भने दोस्रो भागमा उही पुरानै बैक लुटने योजना र लुट–१ म जस्तै हाकु कालेले बैंक लुटेपछि कथा सकिन्छ । निश्चल बस्नेतले लुट–३ बनाउने सोचका साथ कथा बिचैमा छोडेर चिप्लिएका छन जसरी पुरानो डुंगामा रामबाबु गुरुङ चिप्लिए ।
नेपालमा सिक्वेल चलचित्रको ईतिहास खासै लामो छैन । औँलामा गन्न सकिने सिक्वेल चलचित्र मध्ये यो असफल प्रयास हो भन्दा खासै फरक पर्दैन । पुरानै कथा हलमा गएर हेरेको भान भएको दर्शकहरुको प्रतिक्रिया थियो ।
यो फिल्मबाट को को चिप्लिए ?
दर्शकहरुले निश्चल बस्नेतलाई जुन दर्जा दिए । त्यो पुरा गर्न नसक्दा बस्नेत यो चलचित्रमा नराम्ररी चिल्लिएका छन । सौगात मल्लको रोल पनि खासै प्रशंषा योग्य देखिदैन । एकपछि अर्को चलचित्रबाट ओरालो लागेका दयाहाङ राई,ऋचा शर्माको पनि यो फिल्मबाट माथी उठन सकेका छैनन । राजन कार्की र नवनायिक एलिसा राईको भुमिका अरुको तुलनामा केही ठिक देखिन्छ । सुजना सुब्बा पुरानै कथामा अभिनय गरेको भान हुन्छ । यो फिल्म बाट खासै केही नयाँपन देखिँदैन ।
के गर्न सकिन्थ्यो ?
फिल्ममा पुरानै कथाका कारण दर्शक मोहित हुन सक्ने अबस्था देखिँदैन । जुन दर्शकले चाहेका छन त्यो चलचित्रमा पाईदैन । प्रबिधि र लोकेशनका हिसावमा पनि चलचित्र कमजोर देखिन्छ । चलचित्रको जुन प्रचारप्रसार छ त्यो अनुसार चलचित्र बन्न सकेको छैन । पुरानो कथा जस्तो थियो नयाँ पनि त्यही छ । त्यसमा नयाँ गर्ने ठाँउ धेरै थियो । बिना कथा र बिना सन्देशको चलचित्र बनेको झै लाग्छ हेर्ने सबैका लागी यो फिल्म ।
के भन्छन दर्शक ?
पुर्वकै सुबिधासम्पन्न मानिएको आई सिनेमा इटहरीमा फिल्म हेरेर निस्किएका अधिकांश दर्शकले चलचित्रमा पुरानै कथा भएको र नयाँ सन्देश नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन । पत्रकार प्रेम बाँस्तोलाले यो चलचित्रमा कुनै कथा र सन्देश नै नभएको बताए । अन्य अधिकांस दर्शकहरुले पनि चलचित्र मन नपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन ।